Tianjin Xinghua Kucheka Co., LTD
yakasimbiswa muna 1984, nhengo yeTianjin Food Group Co., LTD, kambani yedu iri muna NO.1 Shengchan West Road, Majiadian Industrial Area, Baodi District, Tianjin City, Total nzvimbo iri 46620 mativi metres, ane vakanyorwa guta Mamirioni masere emadhora ekuAmerica.
Muna Zvita 2004, kambani iyi yakatungamira mune imwechete indasitiri muChina kupasa iyo ISO9001: 2000 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi system sisitimu, zvigadzirwa zvese zvinosangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye vakawana Oeko-Tex 100 certification.
Yedu fekitori chigadzirwa chikuru chinosanganisa chirauro uye chiuno neNylon kana Polyester, Heke yepurasitiki, Hook uye Loop yakadzika kugadzirisa uye tambo yekusonesa. Nyorera kupfeka, shangu, matende uye ruoko kudzivirirwa uye zvekurapa zvishandiso nezvimwe.
Yedu fekitori chigadzirwa chiri kupisa kutengesa muChina, kutumira nyika zhinji pasi rese. Canada Fellfab Limited senhengo yega muNorth America nzvimbo. Kutendeseka, mhando yepamusoro uye sevhisi seyedu manejimendi pfungwa uye kuzvipira kuita mutungamiri mumutsara.
"Kutenda kwakanaka kweizvi, hunhu mweya" ndizvo zvinangwa zvebhizinesi rekambani yedu, "kutendeseka, kushingairira, tariro, kubatana kwepamberi, kunatsiridza, hunyanzvi" hunhu hwedu hwekambani.
Professional timu, yepamusoro michina, yakatsiga mhando, yakavimbika sevhisi
1.Strict mhando kutonga.
2.Quick dhirivahari nguva.
3.Professional kugadzirwa uye akapfuma ruzivo.
4.Makwikwi emitengo ine basa rakakwira.
Q: Ndinogona kuwana ivhu? A
A: Vatengi vatsva vanotarisirwa kubhadhara mutengo wekutakura, nepo iwo mahara ari emahara. Mari iyi inobviswa pamubhadharo wehurongwa hwepamutemo.
A: Mifananidzo kana dhizaini dhizaini kugadzira → kugadzira masampuli → sampuli bvunzo → kugadzirwa kwakawanda → quanlity bvunzo → kurongedza
Mubvunzo: Zvinoita here kuti ita inotsvedza maererano nechikumbiro?
A: OEM inowanikwa, kusanganisira yakasarudzika dhizaini, ruvara, logo, kurongedza ...
Mubvunzo: Ndingawana chero dhisikaundi here?
A: Mutengo unotaurika, isu tinogona kukupa iwe dhisikaundi zvinoenderana neodha yako yakawanda.